I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Michał
U-Michał Ungumbungazi ovelele
I-loft yethu ingenye yohlobo ngempela. Izici zayo eziyingqayizivele njengobude begumbi elingu-3.2, amafasitela amathathu amakhulu futhi alukho udonga phakathi kwegumbi lokuphumula negumbi lokulala, zakha indawo yokuhlala evulekile, ekhanyayo kuwo wonke amakhona e-suite. Idizayini yesimanje, yangaphakathi yezimboni igqamisa kahle ukwakheka kwefulethi futhi idala umuzwa ovulekile kodwa othokomele. Ukukhanyisa kwe-LED ngemuva kwe-TV nangaphansi kombhede kunomthelela emoyeni ebusuku nasemini.
Senze isiqiniseko sokuhlinzeka ngokusebenza okuphezulu kwedijithali kwefulethi. Sinikeza izivakashi zethu i-TV engamayintshi angu-46 enobuchwepheshe be-Chromecast, ikhebula le-TV nokufinyelela ezinkundleni ezifana ne-Netflix noma i-Spotify. Konke ukusetha kuhambisana nesipika sebha yomsindo kanye ne-subwoofer. Endlini yokugezela uzokwazi ukuthola ukushisa phansi okulawulwa idivayisi yesikrini sokuthinta odongeni, umshini wokuwasha kanye neshawa nge-thermostat. Kukhona nesethi yezimonyo ezifana nejeli yeshawa, ishampoo, i-conditioner, umuthi wokuxubha njll. Indawo yokulala inombhede olingana nenkosi onomatilasi wekhwalithi ephezulu kakhulu, amawodrobhu amakhulu kanye nedeski. Ikhishi liqukethe izici ezinjengomshini wekhofi, iketela, umshini wokugeza izitsha, ifriji, ifriji noma ikhishi. Konke kuhlanganiswe amakhabethe agcwele izingilazi, amapuleti, izitsha, amapani, amabhodwe, izinqamu kanye nezithako zokupheka njengezinongo ezihlukahlukene noma amafutha omnqumo.
Ifulethi litholakala enkabeni yedolobha lase-Bialystok, endaweni "yeBojary" (endala futhi ecebe kakhulu endaweni yesikhumbuzo yedolobha) endaweni eyi-850m ukusuka eRynek Kościuszki (isikwele sedolobha elikhulu). Ifulethi litholakala endaweni ethule yangasese ehlukile kunengqalasizinda yezimboni, eguqulelwe ekubeni yizindlu eziphezulu. Womathathu amafasitela abheke egcekeni elikhulu ngakho-ke ngeke kube namsindo womgwaqo ongena efulethini. Izivakashi zethu zingathola igrosa eminingi nezitolo ezingu-24/7, izindawo zokudlela, amabha, izindawo zokudlela kanye namakilabhu eduzane. Ihhotela i-Gołębiewski eline-aquapark kanye ne-spa liqhele ngamamitha angu-300 kuphela. Ukuhamba ngezinyawo imizuzu engu-7 ukusuka ku-suite kuzokuyisa e-Piłsłudski Square eduze kwe-Dramatic Theatre futhi ukufika e-Branicki Palace and Gardens kuzothatha imizuzu emi-3 kuphela. Kunenxanxathela yezitolo ezinkulu ezintathu futhi ezitholakala ebangeni lokuhamba ukusuka efulethini - iGaleria Alfa (1km), iJurowiecka (1.2km) neBiała (1.4km).
Izivakashi zethu zingangena noma nini phakathi kuka-3pm no-10pm. Sicela usithumelele izicelo zokungena nge-imeyili noma ngombhalo. Sitholakala phakathi kuka-8am no-1am.
UMichał Ungumbungazi ovelele